Assiyriya - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Assiyriya)
Maabka qiyaastii qarnigii 15aad ee Assiyriya
Assiriya (Af carabi: آشور Af-Laatiin: Assyria Siyriyak: ܐܬܘܪ) waa boqortooyo ka jirtey bariga dhexe wakhtiyadii hore. Waxa boqortooyadani ka bilaabantey webiga Tigris ee waqooyiga deegaanada Mesobotaamiya. Dadka Assiyriyaanku dhowr jeer ayay maamulo boqortooyo samaysteen kuwaas oo ku fiday deeganadii agagaarkooda ahaa.
Magaca boqortooyadani wuxuu ka soo unkamey magaalada caasimada u ahayd ee la odhan jirey Aššur taasi oo lagu qiyaaso ineey dhisantay sanadkii 2600 C.H (Ciise Hortii), taasi oo maanta ku beegan waqooyiga gobolka Saladiin ee wadanka Ciraaq. Caasimada maamulka Assiyriya ee Aššur waxay markeedii hore ka mid ahayd boqortooyadii Akkadiyaanka ee ka talin jirey inta u badan deegaanada Mesobotaamiya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Asiyriya&oldid=151152"